Wasiir sheegay in dambiyada laga qaado Kansarka - BBC News Somali
Wasiir sheegay in dambiyada laga qaado Kansarka
Dadka Hindiya ayaa aad uga carooday wasiirka caafimaadka ee gobolka Assam oo sheegay in kansarku uu yahay "xukun cadaalad ah" oo ka dhasha dambiyadii hore ee uu qofku gaystay.
Himanta Biswa Sarma ayaa sheegay in cudurrada sida Kansarka oo kale ah "ay dadku sidoo kale ka qaadi karaan dunuubtii ay waalidkood gaysteen".
Bukaannada xannuunka Kansarka qaba iyo qaraabadooda ayaa sheegay in ay aad uga murugoodeen hadalka wasiirka ka soo yeeray.
Xisbiyada mucaaradka ah ayaa hadalkaas ku tilmaamay "wax aan la aqbali karin" waxayna ka dalbadeen in uu dadka ka raaligaliyo hadalkaas.
Xisbiga mucaaradka ah ee All India United Democratic Front ayaa sheegay in Sarma uu hadalkan uga gol lahaa "in uu ku qariyo guuldaradda uu kala kulmay xakamaynta cudurka Kansarka ee gobolka ku sii faafaya".
Hadalkaas ayuu wasiirku ka sheegay meel fagaare ah isagoo khudbad ka jeedinaya Guwahati Arbacadii.
"Markaan dambaabno Illaahay wuu ina ciqaabi. Mararka qaar waxaan aragnaa qof da'yar oo Kansar ku dhacay ama shil galay, haddii aad dib u fiiriso sidii uu u noolaana waxaad arki in uu galabsaday waxa ku dhacay oo ay caddaalad tahay" ayuu yiri sida uu ka soo xigtay wasrgeyska The Times of India.
Hadalkaas ayaana ka caraysiiyay dad badan oo reer Hindiya ah oo baraha bulashada adeegsada.
Waaxda cilmibaarista caafimaadka Hindiya ee magaceeda loo soo gaabiyo ICMR ayaa sheegtay in wacyigalin la'aan iyo iyo dadka oo aan xannuunkan iska baadhin ay ka dhigan tahay in 12.5% oo kali ah ay dawayn u yimaadaan dadku marka uu xannuuunku cusub yahay.
Waaxdan cilmi baaristu waxay qiyaastay in tirada dadka Kansarka qaadaya ay kor u kici doonaan 20% meesha lagu gaaro 2020ka, sida ay warbixinteeda ku sheegtay.